1. Kukho iidessert ezimnandi ekulula kakhulu ukuzenza, kwaye zezona menyu eziphezulu kwihlabathi liphela kuyo yonke iminyaka. Kuba inevumba elithandekayo Incasa ethambileyo kunye egudileyo Ukudibana neentlobo ezininzi zezitya zecala Hombisa kakuhle ngokokuthanda kwakho okanye into onayo ekhaya ngokugqibeleleyo. Kwaye imenyu enokwenziwa ngabantwana Yongeza ubumnandi kunye nobumnandi kwiiholide okanye phakathi evekini ngemisebenzi elula. Kodwa uziva ukhethekile Kwaye indlela yokwenza iikeyiki Nangona imenyu elula Kodwa nika iinkumbulo kuzo zonke iinkalo ezichukumisayo ngokuqinisekileyo
2. Yazi i-pancake yemenyu eyaziwayo, iPancake (Ipancake) ithathwa njengohlobo lwekhekhe okanye isonka esithe tyaba. Sebenzisa izinto zokwenza imveliso ezenziwe ngomgubo oxutywe nobisi, ibhotolo, amaqanda, iswekile okanye nabani na onokwenza ukujija kodwa angathanda Ngokuzisa umgubo kwifry ngeoyile okanye ibhotolo ide iphekwe Kungoko igama Pan liqhotyoshelwe Ngaba yimvelaphi yegama le dessert, iikeyiki ezityiweyo zishushu Njengesidlo sakusasa Okanye uhombise ngesiraphu Ubusi kunye neziqhamo Kunye netshokholethi Inokwenziwa kwisitayile esiyithandayo nosapho.
3. Izithako zokwenza i-pancake ziyaziwa njengezithako eziza kubakho phantse kuwo onke amakhitshi kuzo, kungabikho zinto zongezwayo zithengwayo. • Umgubo wengqolowa • Iswekile • Ityuwa • Umgubo wokubhaka • Amaqanda
4. Uyenza njani iikeyiki Imenyu emnandi neyolisayo • Galela umgubo wengqolowa, iswekile, ityuwa, umgubo wokubhaka kwisitya kwaye ugubungele zonke izithako ndawonye. • Nyusa iqanda ugalele ubisi lwenkomo kunye nencasa encinci yevanilla. Emva koko uvuse yonke into kunye de ibe iyinto enye. Nyibilikisa ibhotolo emanzini. Beka bucala ukufudumeza, yongeza ibhotolo kwaye uxhokonxe de uhambelane. Bekela bucala ixesha elifutshane. Kude kube ipani iqala ukuba shushu • Xa ipani iqala ukuba shushu nge Yongeza ibhotolo encinci.
5. • Ngobuhle bokwenza iikeyiki, khetha ipani ethe tyaba • Emva koko linda ibhotolo inyibilike ngokupheleleyo • Qalisa ukugalela umxube wepanekuku ngepani. Ubume obuthandwayo bujikeleze. Ubungakanani nantoni na oyithandayo Okanye nabani na onethinti angabeka ipani kuyo aze ongeze nebetter pancake. Kude kube iipenikeyiki zimdaka ngombala, zintle.
6. Kwimozulu epholileyo, yiba nama-pancake amnandi kwaye amnandi kwaye usele iti, ikofu okanye i-cocoa eshushu. Inceda ukudala imeko elula Ukuba shushu kwaye sihle Kunye nemenyu abantwana abanokuyithambisa njengoko bethanda Kunye nokuhombisa iiplate njengobugcisa ngaphandle kwemida Kuyabanda Masongeze imfudumalo ngendlela elula yokwenza iikeyiki ukwenza ulonwabo kusapho lwakho !!!